Best Practices – GlobalNet
GlobalNet ၏ မြန်နှုန်းမြင့် Dedicated Internet Access (DIA) ၏ အားသားချက်များ
GlobalNet ရဲ့ Dedicated Internet Access (DIA) ဆိုတာဘယ်လို အင်တာနက်အမျိုးအစားလဲ? GlobalNet ၏ Dedicated Internet Access DIA ဆိုသည်မှာ သီသန့် Fiber Cable မှ တဆင့် Customer Sites သို့ အရောက်ပေးပို့ပေးမယ့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Data Center နှင့် customer sites များကြားမှာ တခြား မည်သည့် Device မှ ကြားခံထားခြင်းမရှိပဲ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးသည့်အတွက် Data ပေးပို့မှုနှုန်း ပိုမိုမြန်ဆန်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ “Dedicated Bandwidth” နည်းပညာအရ တခြားမည်သူနှင့်မျှ Sharing လုပ်စရာမလိုပဲ Dedicated Bandwidth ကိုရရှိမှာဖြစ်သည့်အတွက် မည်သည့်အချိန်မှာမဆို
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အင်တာနက်က လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက် (Basic Need)တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ Internet User တွေ မကြာခဏစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတာတော့ လိုင်းမကောင်းတာအပြင် လေးလံနှေးကွေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့နည်းလမ်းတွေပါပဲ။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုသုံးတော့မယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့် လိုင်းတပ်ဆင်ဖို့အတွက် လနဲ့ချီစောင့်ရတာ၊ လိုင်းမကောင်းလို့၊ တစ်ခုခုအရေးပေါ်မေးစရာပေါ်လို့ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ပေမဲ့ မျက်နှာလွဲခဲပစ်အလုပ်ခံရတာတွေကို အဓိကကြုံနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်သုံးတဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုက မြန်ဆန်လေ၊ ထိရောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လေ သုံးရတာ စိတ်ချမ်းသာရလေပါပဲ။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေ အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ဖို့အတွက် 5BB က လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ လိုင်းတပ်ဆင်တာကစလို့ Service မျိုးစုံပြောင်းလဲသုံးစွဲတာအထိ အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Online မှ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တိုက်ရိုက်၀ယ်ယူလိုပါသလား??https://bit.ly/5BBregisterform လက်ရှိသုံးစွဲနေသော Service Plan အား Plan
ကျွန်တော်တို့ GlobalNet Company အနေဖြင့် Customer များ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေရန်နှင့် Customer Service များကို အကောင်းဆုံးပေးနိုင်ရန်အတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်နေ‌သော အချက်များကို တစ်ဆင့်ချင်းဆီ မျှဝေပေးပါဖြစ်ပါတယ် 1. Anticipating Customer Needs and Preparing Operations to Meet them Customer တစ်ဦးချင်းစီတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီသော လိုအပ်ချက်များရှိတတ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းဟာ customer ကဘာကို လိုအပ်နေတာရယ် customer ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေလည်းဆိုတာ တွေကို ကောင်းစွာမသိဘူး၊ Customer တွေရဲ့လိုအပ်ချက် တွေကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူး၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိဘူးဆိုရင် သင်တို့ဖောက်သည် Customer